सिटसंख्या थपेर रकम असुल्छन् ‘डिलक्स’
विराटनगर / यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सामन्य बस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्वीकृत लिइएको सपना डिलक्समा ३५ जना यात्रु अटाउने सिट क्षमता छ ।
क्याबिन समेत गरि चालक, सह–चालक र सहयोगीसहित ४२ जनासम्मको क्षमता सपना डिलक्समा छ । सपना डिलक्समा दुईवटा सिटबीचको दुरी १६ इन्च छ । यात्रु बस्दा भने त्यति सहज महसुश गर्दैनन् ।
साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएको रमाइलो कम्पनिको सपना स्तरीय सेवा दिने ‘डिलक्स’ हैन । तर, उसले डिलक्स नाम लेखेर यात्रुसँग भाडा बढी लिने छुट भने पाएको छ । मापदण्ड नै नपुगेका सपना डिलक्स जस्तै धेरै कम्पनिका बसले यात्रुसँग भाडा असुल गरिरहेको विषय भने अनुगमनका लागि कसैको चासो पनि बन्दैन ।
साधारण बस सेवातर्फको सपना बस भन्दा फरक सुविधा बसले मापदण्डमा तोकिएको दुईसिट बीचको १८ इन्चको दुरीलाई खुम्च्याएर १६ मा झारेको छ । सुविधालाई ३१ सिट क्षमताबाट ३५ सिटमा विस्तार गरिएको छ । दुई सिटबीचको दुरी घटाएर चारजना यात्रुका लागि सिट थपेको सुविधा डिलक्सको मापदण्ड साधारण बस सेवास्तरकै छ । तर, पनि यात्रुसँग भाडा भने डिलक्स सरह नै लिईरहेको हुन्छ ।
कानुन विपरित डिलक्सको स्वीकृति लिएर सिट संख्या थप्न र साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएर डिलक्स लेख्न पाइदैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख भीम गौतम सरासर गलत हुने यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई रहने बताउनुहुन्छ ।
ब्लुबुकमा उल्लेख गरिएको सिट संख्या भन्दा बढी देखिएमा तत्काल सिट हटाउनेदेखि कानुन अनुसार तीनलाख रुयिँयासम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीका लागि तोकिदिइको गौतमको भनाई छ । तर, प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल स्थानीय यातायात समितिमार्फत त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने यातायात व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख हुने भएकोले ट्राफिक प्रहरी जिम्मेवार नरहने दाहालको दावी छ । उहाँले यातायात व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाबाट खुल्ने यस्तो पोलको दोष ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने गरिएको बताउनुभयो ।
विराटनगर बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दुरीका लागि छुट्ने धेरै बसहरुको अवस्था सपना वा सुविधा कै जस्तो छ । रमाइलो बस सेवा प्रा.लि. अन्तर्गतका सफल, सुविधा, शितल बसले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ३१ सिट क्षमताको स्वीकृति लिएर ३५, ३७ सिटको स्वीकृति लिएर ४१ सिट बनाउनदेखि साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएर डिलक्स लेख्ने र भाडादर बढाएर लिने गरेका छन् ।
साधारण र डिलक्स सेवा दिने बसको भाडादर फरक हुन्छ । तोकिएको भाडा दरमा डिलक्स बसले २० प्रतिशतसम्म बृद्धि गरेर यात्रुसँग लिन पाउने प्रावधान छ । त्यसका लागि यात्राका क्रममा यात्रुले आरामदायी महसुश गर्नुपर्दछ । अगाडी र पछाडीको दुई सिटबीचको दुरी १८ इन्च, एलइडी लाइट, मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन, पानी राख्ने ब्यागदेखि फोहोर राख्ने डस्पिनसम्मको व्यवस्था गाडी भित्रै हुनुपर्दछ ।
सिट थपेर साधारण मापदण्डमा खुम्च्याइएको बसले यात्रुसँग भने डिलक्सको भाडा असुल गर्ने र साधारण बस सेवा लिने स्वीकृति लिएर डिलक्सको भाडादर लिने दुवै यात्रुलाई ठग्ने व्यवसायी हुन् । बस सेवा सञ्चालनका लागि रोड र रुट पर्मिट लिइएका यातायात कम्पनिका सञ्चालकले गरेको कानुन विपरित हुने कामको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने पक्ष भने जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहँदै आएको छ ।
माउण्ट मकालु यातायात सेवा प्रा.लि.का इन्चार्ज मोसिम आलम सिट संख्या थपेका बसले नियमन गर्ने निकायलाई मिलाएको हुन्छ । तर, स्वीकृत मापदण्डमा सञ्चालनमा रहेका बसहरुले ट्राफिक प्रहरीलाई मिलाउन नसक्दा झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिव पोखरेलले बसपार्कबाटै सिट थपिएका गाडीलाई सम्मानसहित छोड्ने गरेको आलमको आरोप छ । आलमको यो आरोपलाई प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले भने कानुन विपरित रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने दावी गर्नुहुन्छ । तर, बसपार्क क्षेत्र भन्दा बाहिर काउन्टर राखेर सडकमा पार्किङ गरेको बसमा यात्रु चढाउने कुरा गलत रहेको उहाँको भनाई छ ।
साधारण सेवातर्फका बसहरुले विराटनगर–काठमाण्डौंको भाडा ९५८ रुपिँया लिनुपर्ने तोकिएको छ । डिलक्स बसहरुले एकहजार २४८ रुपिँयासम्म लिन पाउने प्रावधान छ । सिट संख्या थपेपछि साधारण बससरह भएका डिलक्सले पनि भाडा दर घटाउनु पर्ने माग कतिपय व्यवसायीहरुको छ ।
रमाइलो बस सेवा प्रा.लि. तथा कोशी डिलक्सका अध्यक्ष प्रदिप न्यौपाने कानुन विपरित कसैले कुनै काम गर्न नपाइने बताउनुहुन्छ । उहाँको कम्पनिका सञ्चालक आफैं सहभागी नभई कामदारको चलाख्याँईका कारण यस्ता गतिविधि हुनसक्ने भनाई छ ।
फिल्ममा मुलुककै ठूलो समस्या उठाएको छु : दीपेन्द्र लामा
नेकपाको चियापान, विकास धनाढय वर्गले देखेन : ओली